အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကြောင့် ဒီမိုကရေစီစနစ် ပျက်ပြားစေနိုင်
ဒီမိုကရေစီ လူမှုအဖွဲ့အစည်းက ချီးမြှင့်တဲ့ Geremek ဆုကို လက်ခံရယူဖို့ မွန်ဂိုလီးယားကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ပုံ
photo: Community of Democracies
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဟာ ဒီမိုကရေစီကို ပျက်သုန်းစေတဲ့ အရာဖြစ်တယ်လို့ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံရောက်နေ တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီနေ့ပြောကြားလိုက် ပါတယ်။ လူလန်ဘာတာမြို့တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ ၇ ကြိမ်မြောက် ဒီမိုကရေစီ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ညီလာခံမှာ အဲဒီလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မွန်ဂိုလီးယားသမ္မတက ဖိတ်ကြားတဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဧည့်သည်တော်တစ်ဦး အဖြစ် ညီလာခံမှာ တက်ရောက်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီ လူမှုအဖွဲ့အစည်းက ချီးမြှင့်တဲ့ Geremek ဆုကိုလည်း လက်ခံရယူဖို့ရှိပါတယ်။ ဒီဆုဟာ ပိုလန်နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာ အဓိကအခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတဝန်းဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေး ဆောင်ရွက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ထူထောင်သူတွေထဲ ပါဝင်တဲ့ ပါမောက္ခ Bronisław Geremek ကို ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်တဲ့ဆုဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မွန်ဂိုလီးယား သမ္မတအိမ်တော်မှာ “မွန်ဂိုလီးယားနဲ့ မြန်မာလွတ်လပ်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ရှေးရှုရာလမ်း” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ သမ္မတနဲ့အတူ မနက်ဖြန်ဟောပြောမှာဖြစ်ပြီး သတင်းစာဆရာတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ညီလာခံဟာ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ကျင်းပတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံအကျိုးအတွက်ကူညီဖို့ စာပေသမားတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မေတ္တာရပ်ခံ
Some body can not see the true ability of Her because they are not up to her standard and qualification. Some body can not see her ability because they are deaf and blind.
နေရပ်- THE PRIZES
မင်းလေးလဲ မင်းအဖေ လို ပညာအမျှော်မြင်ကြီးပြီး၊ လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည် နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့၊ တိုင်းပြည် နဲ့ ပြည်သူအကျိုး မျှော်တွေးလုပ်ဆောင်တဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက် ဖြစ်လာစေချင်ပါတယ်။
How she gonna fix that in burma.